Nzira nhanhatu dzekushanda nevanofurira Pasina Sponsorship | Martech Zone
Kunyange vanhu vazhinji vachitenda kuti kushambadzira kwepesvedzera kwakangochengeterwa makambani makuru ane zviwanikwa zvakakura, zvinogona kushamisa kuziva kuti kazhinji hazvidi bhajeti. Mhando zhinji dzakapayona kushambadzira kushambadzira sechinhu chikuru chekutyaira kumashure kwekubudirira kwavo e-commerce, uye vamwe vakaita izvi nemutengo we zero. Vanofurira vane kugona kukuru kwekuvandudza mabhii emakambani, kuvimbika, kufukidzwa kwenhau, social media inotevera, kushanya kwewebhusaiti, uye kutengesa. Mamwe acho anosanganisira akakura maakaundi paYouTube (funga yakakurumbira Youtube gamers sePewDiePie ane anokatyamadza 111M vanyoreri) kana akasiyana niche maakaundi mune chaiwo maindasitiri (mienzaniso yeiyi murwere uye chiremba vapesvedzera vanoshanda).
Ne influencer marketing inofanotaurwa kuti icharamba ichikura pa 12.2% kusvika $4.15 bhiriyoni muna 2022, ma brand madiki anogona kushandira pamwe nevanokurudzira kubatsira kutengesa chigadzirwa chavo nemasevhisi, uye vanogona kuita izvi pasina muripo. Hedzino nzira nhanhatu dzemhando dzinogona kushanda nevanofurira pasina rutsigiro:
1. Influencer Product kana Service Gifting
Imwe yedzakareruka nzira iyo mabhureki anogona kushanda nevanofurira pasina mubhadharo wezvavanotumira ndeye chigadzirwa kana sevhisi zvipo. Ivo vanogona kushandisa yavo hesiti uye nekupa vapesvedzera kuchinjana uko munhu anopesvedzera anopa imwe huwandu hwesocial media yekuvhara. A pro tip ndeyekugara uchienda kune vanofurira nekupa zano kuti iwe ungade kupa chipo usingaratidzi iwo chaiwo maparamita ekutsinhana. Nenzira iyi, vazhinji vepamusoro vanopesvedzera vanogona kupindura chikumbiro chako sezvo vasinganzwe "kusundidzirwa" kutsiva pasina zvisina kukwana kushambadzira. Kutengeserana kusina kuenzana zvinoitika kana Influencer's Instagram feed post inodhura kupfuura chigadzirwa kana sevhisi pachayo.
Iyo mhando inofanirwa kugara ichiziva kuti vanofurira vanogashira gumi nemaviri uye dzimwe nguva kunyange mazana emhando dzemhando pazuva, sezvazvakaita nevazhinji vanofurira. Nechikonzero ichi, kuve nekuwedzera hushamwari uye kusununguka pamusoro pemitemo yekubatana kunozobvumira iyo mhando kuratidza iyo inofurira kuti ivo vanofarira zvinopfuura kungokurumidza "kushevedzera" uye pachinzvimbo vari kutsvaga kubatana kwenguva refu.
Berina Karic, inyanzvi yekushambadzira pa Yepamusoro Influencer Marketing Agency, inopawo zano rekuteedzera zvine ruremekedzo kana zvinhu zvagamuchirwa. Zano rake nderekutarisa neanofurira kuti avabvunze kana vakagamuchira uye vakafarira chipo chavo, uye kana ivo vaida kuchinjanisa chero chinhu. Iyi mhando yekudyidzana kwehushamwari inogona kuhwina mapoinzi makuru uye kuita kuti brand ionekwe.
Chiratidzo chinogona kuronga rwendo uye kugamuchira akawanda anopesvedzera uye kugamuchira zvakapetwa kagumi huwandu hwekuvharirwa pamutengo wekufambisa, chikafu uye pekugara. Semuenzaniso, mhando inogona kugamuchira vashanu vanofurira kuti vaende kune imwe nzvimbo uye kushandisa nguva ino semukana wekugadzira zvirimo zvechigadzirwa pamwe nekushambadza akawanda mapositi achiongorora zvinhu kana sevhisi. Iri zano rePR rinoshandiswa neakawanda emhando yepamusoro mabhureki uko ivo vane epamusoro pesvedzero vanogadzira akawanda mapositi anosimudzira mhando yemukana wekufamba uye kutandara nevamwe vanogadzira. Influencer nzendo dzinopawo kugona kwechigadzirwa kukudziridza zvisungo zvepedyo nevapesvedzera vanopa brand mukana wekushandura vamwe vanonyanya kuita pesvedzero kuva vamiriri vemhando yekuwedzera chigadzirwa chesocial media kutumira.
Zano iri raive kupayona nemhando dzekutanga dzemagariro seRevolve, kwavaizotambira akawanda epamusoro pesvedzero kunzvimbo dzekunze vachitsinhana negumi-10 mune zvekudyisa mameseji uye akawanda emazuva ese enyaya mavhidhiyo uchimaka iyo mhando.
3. Zviitiko zveInfluencer
Kune iwo mabhureki asingakwanise kuronga nzendo, zviitiko zvinopesvedzera zvinogona kupa mhando inodzoreka yekudyidzana uko vanofurira vanogona kutumira akawanda zvidimbu zvemukati mukutsinhana kuenda kuchiitiko. Chiratidzo chinogona kuronga chiitiko muhofisi yavo, resitorendi, kana dzimwe nzvimbo dzinonakidza uye kupa mabhasikiti ezvipo kune vanofurira kuti vaone chigadzirwa kana sevhisi mumunhu. Chikwata chemukati chinogona zvakare kusangana nevanofurira chiso nechiso uye nekutsanangura mabhenefiti echigadzirwa zvakananga uku ichibvumira vanofurira kutora mifananidzo kana firimu kuratidzwa kwechiratidzo. A pro-tip kupa a yakasarudzika uye Instagrammable marongero uko vanofurira vanogona kutora mafoto pasi pekushongedza brand logos kana kugovera zvakashongedzwa zvematafura marongero nemanapkins avo ega ega kana ma tag ekuchengeta.
MaBrand anogona kupatsanura mutengo wekuitisa chiitiko kana rwendo rwekupesvedzera nekusvika kune mamwe mabhureki uye kugovera mukana wavo wekupesvedzera mushandirapamwe. Mazhinji asiri evakwikwidzi mabhureki akanyanya kuvhurika kune rudzi urwu rwekudyidzana sezvo ivo vachiwana bhenefiti izere yekubatana kwechidimbu chemutengo asi vasingafanire kushingirira kuzere kuedza kutonga hombe yekupesvedzera mushandirapamwe. Vanokwanisa kutora chikamu nekubatanidza zvigadzirwa zvavo mumabhasikiti ezvipo kana nekupa nzvimbo, pekugara muhotera, kufamba, kana imwe mhando yebasa zvichienderana nekuti vanoshandira indasitiri ipi. MaBrand anogona kutosvika kure kuti ave nevakawanda vavanoshanda navo kutora chikamu uye kugadzira zvinoshamisa zvinokurudzira zviitiko. izvo zvinopa huwandu hwakawanda hwekuvhara kune ese mapato anobatanidzwa.
5. Influencer Product Kukwereta
Kune iwo mabhureki asingakwanise kupa zvipo zvinhu, kunyanya kana chinhu chiri kudhura kana chiri chimwe chemhando, vanogona kuratidza rudzi rwekukwereta rwekubatana. Mhando iyi yekudyidzana inosanganisira anopesvedzera kugadzira zvemukati vachishandisa chinhu, achichidzosera mushure mekunge kupfura kwapera, uye vozogovana chinhu pasocial channels. Mafemu mazhinji epamusoro ePR anoshandisa zano iri rekupfura mapikicha apo vanokweretesa zvidimbu kuzvikwata zvevapepeti munhau dzepamusoro chete kukumbira izvo zvinhu kuti zvidzoserwe kana kupfura kwapera. Izvi zvinoshanda nemazvo kana munhu anofurira achitsvaga props kana zvidimbu zvakasarudzika zvekusanganisira sechikamu chezvavo zvitsva.
Kana mhando isingakwanise kupa chipo kana kukwereta chinhu, ivo vanogona kudyidzana neane influencer kuburikidza nemutual media kudyidzana. Izvi zvinosanganisira mhando yekuchengetedza midhiya kuburitswa kuburikidza nekuburitswa kwenhau, kubvunzurudza, kana imwe mhando yekutaura, uyezve kusanganisira anopesvedzera munyaya yavo sechikamu che cross promotional kuedza. Iwo mabhureki anogona kutaurirana nezve mamiriro ekubatana zvisati zvaitika, uye wobva waita kuti anopesvedzera agoverane chinyorwa chenhau pamagariro avo panguva yekumaka mhando.
Hazvina mhosva nehukuru hwemhando, kushanda nevanokurudzira kunogona kuratidza kuve nzira inodhura yekushambadzira bhizinesi nekuvandudza mabhidhiyo, kutengesa, kuvharwa kwenhau, uye social media inotevera. MaBrand anogona kushandisa nzira dzekugadzira kuona kuhwina-kuhwina kudyidzana pasina kutyora bhangi. Nekuongorora mhando dzakasiyana dzekutsinhana kwevapesvedzera, kambani inogona kuona kuti ndeipi nzira inonyanya kushanda uye yoenderera mberi nekuvaka kushambadzira kwavo kutenderedza kudyidzana kuhwina.
Tags: berina karicinfluencer kubatanainfluencer zviitikokushambadzira kushambadzirainfluencer marketing agencyinfluencer media kudyidzanainfluencer chigadzirwa kukweretainfluencer chigadzirwa chipoinfluencer service giftinginfluencer nzendoshamwari brand kubatanaservice giftingkusaenzana kutengesa